Ukunakekela ukubukeka kwakho nge amakhambi emvelo yemvelo kunikeza imiphumela emihle kakhulu. Lokhu uphinda beauticians ochwepheshe usebenzisa ngokuhle kunakho konke kwawo.
Clay ghassoulite ezahlukene eziqondile "mylnostyu" futhi ezihlukahlukene ephulukisa izakhiwo zobumba. Kunconywa ukusebenzisa njengendlela cleanser ngokujulile umzimba, ubuso nezinwele, enikeza nomphumela omuhle ngaso leso sikhathi.
Clay ghassoulite elisuka Arabhu, inguqulo yezwi nezwi yegama layo: "wokuwasha ukugeza". Sekuyisikhathi eside esetshenziswa abakhileyo Afrika nase-Asia njengenhlangano cleanser ngempumelelo. Namuhla, amakhono zayo zokwelapha baziwa. Ubumba elisetshenziswa zokungcebeleka kakhulu futhi Spas, okusekelwe kuso ukwenza ezisonga kanye buso kwelapha lula ukululama ngokushesha, ukuhlanzwa, kususwe kokungapheleli ekhona emzimbeni.
I izakhiwo kaolin Clays zihlukaniswa elithambile, ikhono lazo umswakama, asiza isikhumba ukuqeda anqwabelene kuwo izinsalela izinto eziyingozi namafutha. Ngaphezu kwalokho, imali okusekelwe kuzo Site zonke izinhlobo isikhumba, ngaphandle kokukhetha, ithonya labo mnene akusho ukuphazamisa Ukuvikelwa zayo zemvelo futhi normalizes nezindlala sebaceous. Manje Clay ghassoulite okwandile. It angathengwa ngesimo amaphilisi onomfutho, impuphu, noma izinhlayiya zegazi. Kuyingxenye eziningi amashampu zokwelapha, buso kanye exfoliants, kodwa uma oyifunayo, kungenzeka ukwenza ngokwakho.
Kuyaziwa ukuthi lo mkhiqizo kabanzi lisetshenziswe Hamman. Ngenxa yalo enhle kakhulu yokuhlanza ikhono engaphezu kwenkulungwane akalilahlile kwayo naphakathi kwabakhileyo eMpumalanga ubumba ghassoulite. Ukusebenzisa ke kuze kube sezingeni lokuba ngenxa uhla elandelayo izakhiwo:
Ngokuphelele mylitsya, kuyilapho eyenza umuntu acabange eseZwini ngokujulile isikhumba iyavuleka bonke izinto eziyingozi.
Ngenxa yamandla ayo ezithambile ingasetshenziswa noma iyiphi ingxenye yomzimba, Kusizuzisa on izinwele kanye isikhumba, asuse zonke fat ngokweqile futhi bebanika ukudla izakhi.
Singasetshenziswa nasezinganeni ezindaweni ezizwelayo kakhulu, kusho kahle pozdeystvuet isikhumba, asuse fat ngokweqile futhi kujwayeleke yayo ibhalansi amanzi.
Ikakhulukazi imiphumela emihle kungabonwa esikhumbeni athambekele ekusebenziseni okuqukethwe amafutha, ubumba olwisana kahle nazo zonke izinhlobo ukuqubuka phezu kwayo, ukuvuvukala ngokweqile amafutha bukhanye.
ubumba okunjalo anezakhi emangalisayo ngenxa yokuqukethwe amaminerali. Potassium, insimbi, i-sodium, zinc, magnesium ne-silicon ukudala inhlanganisela ephelele ikhuthaza ukuthi uhlanzekile ezinhle, kususa izinto eziyingozi ikhule ezimbotsheni emincane futhi ususe zamehlo.
Esisemqoka umkhiqizo wabo Umbuso indawo ye umzimba, ubuso nezinwele ubumba ghassoulite. Isicelo (izibuyekezo zisikisela) kuholela imiphumela elandelayo:
kakhulu ngcono futhi evens ukubonakala;
kushintshwe okusaqanda yayo (emva ukusetshenziswa kwalesi imaski ubumba enyangeni kwakukhona ukunciphisa olukhulu endleleni nokuwohloka kwesikhumba kwesilevu futhi asuse imigqa emihle);
qualitatively bahlanza ikhule ezimbotsheni, ubumba kuyabasiza eliwumngcingo;
Ngomusa kususa izinhlayiya isikhumba esifile, ubuso iba bushelelezi, ubumba kunomthelela ukuvuselelwa kangcono zonke ukwakheka kwesikhumba ngcono jikelele ku ukubonakala kwawo;
ikakhulukazi ngempumelelo enqanda ukuvuvukala ubumba (okukhiphayo ketshezi ngokweqile) futhi iwasusa.
Iningi amantombazane kusho ukuthi ngemva isicelo sokuqala alikakangilahlekeli amachashazi amnyama kokuqukethwe amafutha evamile, umuntu waqala ukubheka kubonakale uqabula futhi abasebasha.
Moroccan ubumba yemvelo enezinto eziningi izici kakhulu ukuhlukanisa phakathi nalesi sigaba imikhiqizo. Inqwaba iqukethe magnesium ne-silicon. Sinenkosi nethonya elizuzisa kakhulu esikhumbeni, kodwa wazibonela beauticians lapha waphawula ukuthi ngokuhlanganyela amafutha abalulekile ukuthi bayavuma ezingalindelekile kakhulu esikhumbeni anganikeza ghassoulite nobumba. Ukusetshenziswa mkhiqizo ebusweni kudinga yangaphambi dilution kwanoma iyiphi essence e base ngokwanele. Lokhu kungase isikhuphasha, uju, ukhilimu noma uwoyela ezivamile. Kukhona imithetho okumele ilandelwe:
kusho kuphela isicelo ebusweni ezimanzi, umzimba noma izinwele, ungqimba elingenele ukugwema omiswe aphume isikhumba ngokucophelela;
I-kuhlangana akudingekile ukusebenzisa isitsha kwensimbi futhi spoon (ingilazi ephelele, Ceramic noma isitsha lokhuni).
Clay ghassoulite, cosmetologists Izibuyekezo ukhombise lokhu kuyisici esibaluleke inakekelwa kuphela ebusweni ngesikhathi esifanele. Ngokuvamile kuba mayelana 10-15 imizuzu. Ngokusho kochwepheshe, kubalulekile ukuthi imaski akusho ome esikhumbeni - lokhu Uyoqeda kungenzeka yokulimala kanye Ukwenyela. Kufanele zivela okuhlangenwe nakho kwabo. Ngemva kwesikhathi ethile umuntu iqala ukubambisana, futhi isimo sobuso ibakhathaze, bese kuba yisikhathi ukususa imaskhi.
Sicela uqaphele ukuthi lo mkhiqizo Moroccan iqukethe e ngezithako zawo eziningi izinto ezikwenza ukuba ngcono okukhulu kwegazi microcirculation, ngakho ngemva kokuhlinzwa umuntu isikhashana ezinye zingase zibe bomvu, ngokuvamile emva kwemizuzu 20-30, isikhumba uthulisa phansi normalizes umbala waso.
ubumba Ghassoulite umzimba, ubuso nezinwele uba cleanser ezimangalisayo ezingenasibalo abakucasulayo lipid yayo isiphuku nezindlala sebaceous. Lisetshenziswa njengendlela buso, insipho, imoto. Sebenzisa wokuhlamba khambi engokwemvelo silula - ngokwanele ukuncibilikisa ubumba esincane amanzi kanye nekhambi okuholela uxubha wonke umzimba. Ukuze uthole imiphumela emihle kutuswa ubambe Ukwakheka emzimbeni futhi izinwele imizuzu eminingana. Ngakho izakhi ukungena kakhulu futhi kahle uqinisa amaseli kudingeka ukuba namaminerali. Ukugoqa isikhumba polyethylene ne ithawula Fluffy, futhi ngemva hashaza eyanele ngamanzi afudumele.
Clay ghassoulite nazo ngempumelelo ikakhulukazi, idatha olunembile ayatholakala elikhombisa ukuthi kunomthelela rejuvenation yayo. izifundo zokwelapha laboratories American wabonisa imiphumela elandelayo:
ngcono ukuthungwa jikelele kwesikhumba - 100%;
uyaxebuka ukususwa 41%;
ukuzinza yamanzi ibhalansi - 79%;
ukwandisa Ukuzivumelanisa nezimo kanye nokulungisa okusaqanda - 24%.
Lihambisana amanzi ezivamile elicwengekileyo, lo mkhiqizo ngokugcwele liveze obala amakhono abo futhi uyasondla isikhumba konke okudingayo, kodwa uma ufisa, ungakwazi ukwengeza inani izingxenye ezithuthukisa umphumela imaskhi.
Kalamula orange - ngenxa yokuba khona kuyo izithelo acid, ukuhlaba zingene kangcono izakhamzimba kumaseli futhi bawasuse zezinhlobo efile.
Honey - Excellent uyasondla isikhumba mass izinto eziwusizo, kuthuthukisa ikhono layo okuzivuselela.
Oil - ikakhulukazi Kunconywa for isikhumba esomile, inikeza ke umswakama eyengeziwe, eyagunyazwa ubumba has a ukumuncwa umthamo namandla kakhulu futhi kungabangela umuzwa yobunzima.
Kuhlangana ncenye kuboniswa ngokushesha ngaphambi ukusebenzisa buso. Vuna it in inqwaba for eziningi izicelo kanye nokugcina ukudla cosmetologists esiqandisini musa batusa. isikhumba oily babheka esihle kwakwakhe ubumba ngamanzi distilled. Kakhulu ubuso overdried zidinga izithasiselo ezengeziwe ezivela okusezingeni eliphezulu amafutha ukhilimu, ibhotela noma ukhilimu.
Indlela yokusebenzisa kahle
Clay ghassoulite kubhekwa umkhiqizo ngokuphelele ephephile, efanelekayo isikhumba ebucayi kakhulu, kodwa kwezinye izimo, uhlelo lwayo lokusebenza kuholela ububomvu ezinzima kwesikhumba. Ukusebenzisa buso lihambisana uju kungase babhebhethekisa yalokho, ngakho ngaphambi isicelo kungcono ukuthi bahlolele ukuzwela. Sebenzisa ingxube kancane ku endololwaneni, ulinde isikhathi osinikiwe, ugeze khona off ngamanzi. Uma izinguquko ibala ayitholakali, ungafaka isicelo ngokuphepha imaskhi. Kulandzelana kwalokucuketfwe lokuhleliwe izenzo lapha kufanele kube ngale ndlela:
Chaza ubumba ngamanzi, ngokuzikhethela ukungeza eziningana izithako engeziwe uhlanganise kahle ingxube nge spatula lokhuni.
Ukuzifihla ngobumba Kulula kakhulu ukusebenzisa ngobuso bakho ibhulashi ekhethekile, njalo ukugwema endaweni iso.
Ukuze uthuthukise umphumela, ungafunda ubuso bakho ngendwangu emanzi, linda imizuzu eyishumi nanhlanu.
Lokho imaskhi akusho ome egama-ebusweni, ngezikhathi moisten ke ngamanzi amancane (ngalezi zinhloso kulungile ukusebenzisa isiponji).
Beauticians ukuncoma ngemva kokukhipha imaski okwengeziwe hashaza ubuso decoction yamakhambi okwelapha, futhi zisebenza amafutha okuthambisa zakho ozithandayo. inhlanganisela enjalo ewusizo umthinta ngokujulile u esikhumbeni, ngokuba ngenxa yakhe uhlobo esishaqisayo, ukuba ngcono okukhulu ngo isimo jikelele.
Duru - insipho, kungase kutholakale eminyakeni
Black I-opium nayo ( "Black opium") - amakha Kwabesifazane ngu Yves Saint Laurent. Incazelo, amanani, ukubuyekezwa
Indlela yokwenza ice cream ngaphandle ukhilimu ekhaya?
Puncher "Hitachi": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nokubuyekeza
Nahariya (Israyeli): isiziba of zasemazweni aluhlaza
Izinhlobo ze-high blood pressure, izimbangela
Zonke European uhlu loukostery, kanye nokubuyekeza
Banana Ukudla isisindo ukulahleka ezinsukwini 3 no-7
Iyiphi inhlanhla ukuthi ibe, noma isici esiyingqayizivele se-Domino ("iMarvel")